सारङ्गीप्रति अचेल गैरगन्धर्व युवाको आकर्षण, सारङ्गीमै गरे विद्यावारिधी ! (भिडियोसहित) – Himalaya TV
Home » मनोरञ्जन » सारङ्गीप्रति अचेल गैरगन्धर्व युवाको आकर्षण, सारङ्गीमै गरे विद्यावारिधी ! (भिडियोसहित)
सारङ्गीप्रति अचेल गैरगन्धर्व युवाको आकर्षण, सारङ्गीमै गरे विद्यावारिधी ! (भिडियोसहित)
१९ मंसिर २०७५, बुधबार १९:००
काठमाडौं, १९ मंसिर । सारङ्गीप्रति अचेल गैरगन्धर्व युवाको आकर्षण छ । कतिपय गैरगन्धर्व युवाले त सारङ्गी वादनलाई व्यावसायिक रूपमै अघि बढाएका छन् ।
झापाका टंक संग्रौला टाइगर मिठो स्वरमा सारङ्गी बजाउँछन् । ब्राहमण समुदायका टंकको रुचि सारङ्गी बादनमा छ । उनी हरेक दिन रियाजका लागि सारङ्गी बोकेर घरबाट निस्कन्छन् । घर परिवारले रोक लगाए पनि टंकले सारङ्गी बजाउन छाडेनन् ।
बोकेर जहाँ पनि लान सकिने । धुन पनि कर्णप्रिय । यस्तै-यस्तै कारणले सारङ्गी मोहमा परे लोचन रिजाल । ब्राहमण समुदायकै लोचनले विद्यावारिधीका लागि सारङ्गीलाई नै विषय बनाए । काठमाडौंका लोचनलाई सारङ्गीको मायाले नै गायक समेत बनायो ।
लोचन र टंकजस्तै सारङ्गी बजाउँदै मन्च तताउँछन् केसी राजा । यी युवा उदाहरण मात्र हुन् । पछिल्लो समय सारङ्गी वादनमा गैरगन्धर्व युवाको सम्लग्नता बढेको छ । दुइ दशकदेखि सारङ्गी बजाइरहेका श्यामल गन्धर्व गैरगन्धर्व युवामा सारङ्गी मोह देखेर दंग पर्छन् ।
गन्धर्व समुदायले सदियौंदेखि सारङ्गी पेशाकै रूपमा अँगालिरहेको छ । यही पेशाका कारण उनीहरू विभेदमा परेका छन् । तर, गैरगन्धर्व युवाको सारङ्गी मोहले एउटा मौलिकबाजाको जगेर्ना मात्र होइन जातीय विभेद हटाउन पनि मद्दत पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । विस्तृतमा हेरौं यो भिडियो –